CFM: « Tsy ekentsika ny fibodoana ireo Nosy manodidina » | NewsMada
CFM: « Tsy ekentsika ny fibodoana ireo Nosy manodidina »
Nivoaka amin’ny fanginany ny eo anivon’ny CFM ka nanao fanambarana, omaly. Anisan’ny nambaran’izy ireo ny tokony hiraisantsika feo amin’izao hiatrehana ny faha-60 taona niverenan ’ny Fahaleovantena izao. « Rariny sy hitsiny raha miverina amin’ny Malagasy ireo Nosy manodidina aty amin’ny ranomasimbe Indianina. Antsika ireo ka tsy ekentsika ny fibodoana azy. Mariky ny fahafenoan’ny fiandrianam-pirenena », hoy izy ireo tetsy Ampefiloha, omaly.
Ankoatra izany, notsindrin’ny CFM fa ilaina ny handinihana ny drafitra hanarenana ny ho voka-dratsy rehetra aterak’izao fahasarotana lalovan’ny firenena izao.
Aoka tsy hifanenjika sy hanilika…
Nialoha izany, nambaran’izy ireo fa fotoana izao hanehoana ny soatoavina miorina amin’ny fihavanana. « Aoka tsy hifanenjika sy hanilika ny hafa ary hampitsahatra ny teny sy ny soratra feno fihantsiana sy fanaratsiana, mifanohitra amin’ny kolontsaintsika », hoy ihany ny CFM. Nanentana ny rehetra izy ireo mba hanaraka amin’ny antsipiriany ny toromarika rehetra ara-pahasalamana sy ara-pandaminana ho fitsinjovana antsika sy ny ankohonantsika.
Ankoatra izany, nankasitraka ny ezaky ny filoha Rajoelina Andry sy ny fanjakana ny CFM nanasongadina ny maha Malagasy amin’ny ady atao amin’ny covid-19. « Voninahitr’i Afrika izany fa tsy antsika irery ihany ka tokony hahavelom-bolo ny Malagasy rehetra… » hoy ny CFM.